Saturday July 07, 2018 - 10:20:45 in Wararka by Super Admin
Warar dheeraad ah ayaa kasoo baxaya dagaallo culus oo sedaxdii maalmood ee lasoo dhaafay ka socday deegaanno katirsan gobolka Mudug ee dhaca bartamaha dalka Soomaaliya.
Dagaallada ayaa yimid kadib markii maleeshiyaadka maamulka 'Galmudug' oo ay soo hubeysay dowladda Itoobiya ay weerar gaadma ah ku qaadeen deegaanka Caad oo qiyaastii 50 KM ujira magaalada Xararadheere.
Ciidamo aad uhubeysan oo katirsan Xarakada Shabaabul Mujaahidiin ayaa qaaday duullaan Jawaab celin ah oo gallaaftay nolosha tobaneeyo askari oo katirsan maamulka Galmudug.
War rasmi ah oo kasoo baxay xarakada Al Shabaab ayaa lagu sheegay in ciidamadoodu ay la wareegeen deegaanno dhowr ah oo ay kamid tahay tuulada Gabdhaale oo talis dhexe u aheyd ciidamada Galmudug ee dowladda Itoobiy uxil saartay furidda waddo isku xiri doonta Hobyo iyo dhulka Somaligalbeed.
Al Shabaab waxay sheegtay in ay dishay ugu yaraan 25 askari oo ay kamid ahaayeen labadii taliye ee mas'uulka ka ahaa ololaha lagu furayo wadada Itoobiya ay ku doonayso in ay badeecado uga daabulato dekadda Hobyo .
"Tirada guud ee laga dilay maleeshiyaadka maamulka Ridada Galmudug intii uu dagaalku socday ayaa gaartay 25 waxaana kujira labadii sarkaal ee ciidanka watay" ayaa lagu yiri war kooban oo lagasii daayay idaacadda Andalus.
Ilo wareedyo madax banaan ayaa sheegaya in dagaallo dhacay maalmihii Khamiista iyo Jimcaha lagu dilay 8 askari iyadoona ciidamada Al Shabaab ay isku fidiyeen dhul ballaaran oo dhaca Koonfurta gobolka Mudug.
Mas'uuliyiin katirsan maamulka Galmudug ayaa diiday ay ka hadlaan hardanka ka socda gobolka Mudug balse warbaahin taageersan Dowladda Federaalka ayaa dagaalka socda ku tilmaamtay mid u dhaxeeya Dadka deegaanka iyo Al Shabaab kadib markii dadku ay diideen in ay bixiyaan xoolaha zakada arrinkaas oo ah mid aad uga fog xaqiiqda waxa uu salka ku hayo dagaalka socda.
Waqtigii Al Shabaab ay qaadi jirtay xoolaha zakada lama gaarin oo waxaa ka dhiman sedax bilood mana jiraan wax khilaaf ah oo ka taagan bixinta zakada oo waajib ku ah qof walba oo xoolihiisu gaaraan nisaabka zakada
Sheekh C/qaadir Abuu Cadnaan oo ah waaliga wilaayada Mudug ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamadoodu ay ladagaallamayaan Maleeshiyo ay dowladda Itoobiya soo hubeysay ujeedkooduna yahay in ay furaan wadda isku xirta Hobyo iyo dhulka Somaaligalbeed wadadaas oo sii mareysa duleedka degmada Goldogob ee gobolka Mudug.